Database အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း - A Programmer
A Programmer, 10 months ago02 min read 423
Database ဆိုတာက တော့ အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ data ဆိုတဲ့အရာတွေကို သိမ်းထားတဲ့ collection တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က data တွေကို manage လုပ်ရတာလွယ်ကူအောင်လို့ပါ။ ဥပမာ အနေနဲ့ မြင်အောင်ပြောရရင်
ရပ်ကွက်ရုံးရှိမယ်၊ ကျနော်တို့ရဲ့ မိသားစုနာမည်၊လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊မှတ်ပုံတင် စတဲ့ data တွေကို သိမ်းထားတယ်။ ရပ်ကွက်ရုံးကို database လို့ပြောလို့ရတယ်။
OK! Data & Database ရဲ့ သဘောတရားကို နားလည်ပြီးဆို database က data တွေကို ဘယ်လို Manage လုပ်လဲဆိုတာကို ကြည့်ကြရအောင်။
DBMS (database management system) ဆိုတာကတော့ database ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ data တွေကို access, manipulate , report လုပ်လို့ရအောင် လုပ်ထားတဲ့ programs တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုဖတ်ဒီဖတ် လျှောက်ဖတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ DBMS တွေက အခုမှ ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး ၁၉၆၀ လောက်ထဲက ရှိနေပြီလို့သိရတယ်၊ Charles Backmen ဆိုတဲ့လူရဲ့ Integrated data store (IDS) က ပထမဆုံး DBMS လို့သိရပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်အောက်ကလင့်ခ်မှာ သွားကြည့်လို့ရပါတယ်
ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးများတဲ့ DBMS တွေက ဒါတွေရှိမယ်။
ဒီ DBMS ကတော့ parent-child relationship ပုံစံမျိုးနဲ့ သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာ သုံးလေ့မရှိကြတော့ဘူး။ အရင်တုန်းကတော့ သူ့နေရာနဲ့သူ အသုံးဝင်ခဲ့တယ်။ Records နဲ့ Fields တွေကို Node အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး Tree Structure ပုံစံနဲ့သိမ်းတယ်။ Window XP မှာပါတဲ့ window registry က hierarchical database ကိုသုံးထားတာ၊ သူ့မှာပါတဲ့ configuration settings တွေကို Node တွေအဖြစ်နဲ့မှတ်ပြီး tree structure နဲ့သိမ်းတယ်။
Many to Many relationship ပုံစံနဲ့ တည်ဆောက်တယ်။ Data Structure ရှုပ်တဲ့ နေရာတွေမှာသုံးဖို့သင့်တော်တယ်။ RDM Server က အခု ပြောနေတဲ့ network model ကို သုံးပြီးတော့ ဆောက်ထားတဲ့ DBMS တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ RDM Server အကြောင်းကို အောက်က လင့်ခ်မှာ သွားဖတ်လို့ရပါတယ်။
လက်ရှိအသုံးများနေတဲ့ DBMS တစ်မျိုးလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်။ RDBMS လို့လဲခေါ်တယ်။ ဒီကောင်ကတော့ relationship တွေကို Table Forms ပုံစံတွေနဲ့ဆောက်ပြီးသိမ်းတယ်။ စာသိမ်းမှာဆို Text, Varchar ကိန်းဂဏန်းဆို Integer စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်ပြီးသိမ်းလို့ရတယ့် predefined data types ဆိုတဲ့ အရာတွေရှိတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆို ဒါတွေရှိတယ် – MySQL, Oracle, and Microsoft SQL Server database .etc.
ပုံမှန် DBMS တွေရဲ့ storage လို မဟုတ်ဘဲ object type နဲ့ data တွေသိမ်းလို့ရတယ်။ object တစ်ခုချင်းဆီကနေမှ attributes တွေခွဲတယ်။ performance အရတော်တော်လေးကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့် အခုနောက်ပိုင်း အသုံးများလာတယ်၊ Trendy လဲဖြစ်လာတယ်၊ Manage လုပ်ရမယ့် data များတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ခြား DBMS တွေထက် စာရင် တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ Mongodb တို့ postgre တို့ရှိမယ်။
ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပါပဲ ၊ နောက်နေ့ကျရင် sql အကြောင်းနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။